ကပျ ကွီး ပွီး သှားတဲ့အခါ …
ကံကောငျးသူတှကေ မွကေမ်ဘာကနေ ထှကျသှားနှငျ့ခဲ့ကွပွီ။
အငတျဘေး ၊ ရောဂါဘေး ၊ စဈဘေး ၊ ဥပဒမေဲ့ဘေး တှကေနေ
ကိုယျ့ခဈြသူတှကေို ကိုယျ့ကို ခနျြထားခဲ့တဲ့
ကနျြရဈသူကွကှေဲမှုမြိုး သူတို့ မခံစားကွရတော့ဘူး။
ကံကောငျးသူတှကေ မွကေမ်ဘာမှာ ဆကျနခှေငျ့ရကွဦးမယျ။
ခဈြတဲ့သူတှနေဲ့ ပွနျတှေ့ ပှဖေ့ကျ ခရီးအတူဆကျနိုငျကွမယျ..
ပနျးရောငျစုံတှေ လပွေလေညှေငျးတှေ ပြားပိတုနျးလိပျပွာ ကြေးငှကျသံသာတှေ ခံစားခှငျ့ရကွဦးမယျ..
ဒီ ကပျ ကွီး ကို ကြျောဖွတျဖို့ရာကလညျး …
ကံတရား နဲ့ မတ်ေတာဓာတျက လှဲလို့ အားကိုးရာ မရှိတဲ့နောကျ…
ကနျြနခှေငျ့ရသူတှေ .. ကံဆုံခှငျ့ရသူတှေ.. ပွနျလညျ ပှဖေ့ကျကွမယျလေ။
သဲဖွူလမျးသှယျလေးအဆုံး တောအုပျသေးသေးလေးထဲက အခဈြလကျဘကျရညျဆိုငျလေး..
တောငျပိန်နဲပငျတှအေောကျ အရိပျဖွိုးဖွိုးဖြောကျဖြောကျတှအေောကျက စားသောကျဆိုငျတနျးလေး..
ပတ်တလားသံပေါကျပေါကျ ဖောကျဖောကျထှကျလာတတျတဲ့ အနုပညာခနျးလေး..
ခဈြစရာ ကဗြာစာအုပျလေးတှေ ခငျးကငျြးထားတတျတဲ့ အပနျးဖွခေနျးမထဲက စြေးဆိုငျတနျးလေး..
အလငျးပွိုးပွိုးပြောကျပြောကျ ရတေမာပငျပြိုတှအေောကျက သိင်ျဂါရစုံတှဲလေးတှေ…
စာကွညျ့တိုကျရှေ့ ကံ့ကျောတောအုပျထဲက ရယျသံခြိုလှငျလှငျတှေ….
ငွငျးခုနျကွ.. စိတျကောကျကွ.. ပွနျခဈြကွတဲ့ သူငယျခငျြးတှေ…
ဘယျမှာလဲ.. ဘယျမှာလဲ.. ဘယျမှာလဲ…
အတှေးမှာပငျ တရှိုကျငငျငငျငိုကွှေးရ… ဘယျတော့မှ ပွနျမရနိုငျတော့တဲ့ မွကြှနျးရဲ့ ရကျတှေ..။
အခုတော့ ကိုယျ့မွကြှနျးဟာ အရိပျမြှပငျ မကွှငျးကနျြတော့ ပွီ…
အဲဒီအခါ အလှမျး၌ပငျ ရငျနာကွကှေဲရသမို့ …….
at February 15, 20204comments:
at November 10, 2018 8 comments:
ဆောင်းတွင်းကို ဖြတ်သန်းချိန်မှာ ရာသီဥတုက ချမ်း .. လေတွေများ တိုက်လိုက်လို့ တုန်ခိုက် သွားပြီဆိုရင် အမြဲတမ်း ပထမဆုံး သတိရတာက ကျမ ရောက်ဖူးခဲ့တဲ့ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်က မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနေတဲ့ ဒုက္ခသည် စခန်းလေးတွေကို။ အဲဒီမှာ နှင်းငွေ့တွေ အေးအေးစက်စက် ဝေနေတဲ့ ရာသီအောက်မှာ မလုံမခြုံ သစ်ဝါး အိမ်လေးတွေ .. မြေလမ်းပေါ်မှာ အဝတ်အစား နွမ်းနွမ်း လေးတွေနဲ့ မရွှင်ပျတဲ့ မျက်နှာတွေ နဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံသား အရွယ်စုံ..။ အထူးသဖြင့် ကလေးတွေ..။ သူတို့ အနာဂတ်ကလည်း သူတို့ ဝတ်ထားတဲ့ အဝတ်တွေလို နွမ်းဖတ်.. မပြည့်စုံ.. စုတ်လု စုတ်ခင်.. ပျက်စီး လု ပျက်စီးခင်။ သူတို့ကို ငေးကြည့်ပြီး ကျမ ဓာတ်ပုံတောင် မရိုက်ရက်ခဲ့။ ကျမက သူတို့ကို ဓာတ်ပုံ ရိုက်ပြီး ဘာများ လုပ်ပေးနိုင် မှာမို့လဲလို့ ကျမ ခံစားခဲ့ရတယ်။
နောက်တော့ ရာသီအေးအေးနဲ့ စောင်ပုံထဲ ကိုယ်က နွေးထွေးဇိမ်လုပ်နေချိန်ဆို ကချင်ပြည်နယ်ထဲက စစ်ပြေးဒုက္ခသည်စခန်းလေးတွေဆီ စိတ်ရောက်ပြီး မလုံမလဲ ခံစားရပြန်တယ်။ အဲလိုပဲ ကိုယ်တိုင် နှစ် နှစ်တာ နေခဲ့ဖူးတဲ့ ရှမ်းဒေသ က စစ်ပြေးစစ်ရှောင်ဘဝတွေ..။ အဲဒီ ဘဝတွေအတွက် ဘယ်သူ့မှာ တာဝန် ရှိလဲ.. ဘယ်သူက ဖြေရှင်းပေးမှာလဲ။ အဲလိုတွေးပြီး အဖြေမရတဲ့အခါ ကျမ က ဖန်တီးသူ တွေ ကိုပဲ ခါးခါးသီးသီး မုန်းမိတော့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါကလည်း အဖြေမဟုတ်ပါ။
ကမ္ဘာမြေပြင်ကို အရောင်ခြယ် မျဉ်းကြောင်းတို့ ရေးလို့ဆွဲ .. ဘယ်ဘုရားမှ မပညတ် ထားလည်း .. နယ်နိမိတ်တို့ သတ်မှတ်ခွဲ .. ဘာသာ အယူဝါဒ နဲ့ စကားသံတွေ ကွဲလွဲ .. အပိုင်လိုချင်နေသူအတွက် သူ့ဝန်ပိုတိုး။
အဖြူ အညို မဟူရာ အနီရယ် အဝါ .. အပေါ်ယံအရေပြား .. လူ့ဘဝက အဓိပ္ပါယ် ရှိရဲ့လား.. ခွဲခြား ဆက်ဆံကြ.. ဒီမြေသည်သာ အားလုံးရဲ့ ဘုံဌာနပဲ၊ နိုင်လိုမင်းထက် အကျင့်တွေနဲ့ အကျည်းတန် တယ်။
ဒါ .. အမှန်တရားအစစ်တစ်ခုပဲ.. လောကရဲ့ စံ နဲ့ မူ .. ယဉ်ကျေးသော နှလုံးသား စွမ်းအား ရှိတဲ့ လူဆိုတာသာ လူ.. စစ်တလင်းမဖြစ်စေနဲ့.. ဂေဟမြေ အခြေချသူ.. အရေးကြီးဆုံးတို့ ထိန်းသိမ်းဖို့ အားလုံးသော ဘဝတို့ ကျောခင်းနေတဲ့ မြေ .. ဒါ ဘုံဌာနလေ… ဘုံဌာန လေး…
မျဉ်းတစ်ကြောင်းတို့နဲ့ ကျောချင်းကပ်.. ကျည်ဆံတွေကို ထမ်း.. ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ငိုညည်းသံ.. နားစွင့်လို့ နှလုံးသားနဲ့ ကြည့်စမ်း.. သာတူ ညီဝေမျှဖို့ လက်တွေ့လိုအပ်မှန်း .. လူသား .. ကျည်ဆံ နဲ့ မေတ္တာ .. သင့်ရဲ့ သဘော..
ခုတလော ခဏခဏ နားထောင်ဖြစ်တဲ့ သီချင်းတွေထဲ ဒီ “ဘုံ” ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးလည်း ပါတာပေါ့။ ဒီသီချင်းလေးကို ခံစားရလွန်းလို့ တေးရေး (ကို) ‘အောင်ကိုမြင့်’ ကို ကျေးဇူးတင်.. ဒီလို လူကြိုက် များလေ့ မရှိတဲ့ အကြောင်းအရာမျိုး နဲ့ ဖွဲ့ထားတဲ့ သီချင်းကို စိတ်တိုင်းကျ ရွေးပြီး စိတ်နှစ်ပြီး အကောင်းဆုံး ဆိုထားတဲ့ အဆိုတော် ‘တင်ဇာမော်’ ကို ကျေးဇူးတင်ပြီး လူတွေအများကြီး ဒီသီချင်းကို နားထောင်ပြီး အနည်းဆုံး “အချင်း ချင်း” ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရလေးလောက်ကိုပဲ စာနာတတ်သွားရင် တောင် တော်ပါပြီလို့ တွေးမိတယ်။
တကယ်တော့ လူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အစွဲတွေနဲ့ တိုင်းတာပြီး အရာရာကို ဆုံးဖြတ်နေ ကြတာပဲ မဟုတ်လား။ ကြာလေ.. ကမ္ဘာလောကမှာ အရေးကြီးဆုံးလိုအပ်နေတာက မေတ္တာတရားသာပဲ လို့ သေချာလာလေလေ။ မေတ္တာတရားကသာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဦးဆောင်တယ် ဆိုတာကို ဘုရားလို့ သမုတ်ခံထား ရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးက ပြောခဲ့ပြီးသားပါ။
မြတ်ဗုဒ္ဓ က သတ္တဝါတွေအပေါ် မေတ္တာထားရင်း တကိုယ်ရည် ငြိမ်းအေးလွတ်မြောက်ရာကို ရှာကြဖို့ လမ်းညွှန်ခဲ့တယ်။ တစ်ယောက်စီတိုင်းရဲ့ ငြိမ်းအေးမှုကနေ အစုအဖွဲ့ကြီးရဲ့ ငြိမ်းအေးရာဆီထိ သွားဖို့။
“ငါသည် နာကျင်သောကိုယ် ရှိသူဖြစ်လျက် နာကျင်သောစိတ်ကင်းသူ ဖြစ်လတ္တံ့ ” (ဓမ္မပဒ)
သခင်ယေရှုကလည်း ခွင့်လွှတ်သည်းခံခြင်း မေတ္တာတရားနဲ့သာ ငြိမ်းချမ်းခြင်းကို ဆောင်ကျဉ်းဖို့ လမ်းပြခဲ့တယ်။ “အကြောင်းမူကား.. မေတ္တာသည် သေခြင်းနှင့်အမျှ တန်ခိုးကြီးပါ၏” ရှောလမုန် သီချင်း (အခန်းကြီး၈အခန်းငယ်၆၊ ရှောလမုန်၈း၆)။
အစ္စလာမ်ဘာသာမှာလည်း တမာန်တော် မိုဟာမက်က လူအချင်းချင်း မေတ္တာထားပြီး တန်းတူ ဆက်ဆံဖို့ သွန်သင်ခဲ့တာပဲ။ “ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူတိုင်းကို ပေးကမ်းခြင်းကို ငါ မြတ်နိုးတယ်။ နွမ်းပါးသူ တွေ အပေါ် အမြတ်ထုတ်သူသည် ငါ့နောက်လိုက်မဟုတ်၊ မတူသူများအပေါ် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပြု သူတိုင်းကို ငါ ခွင့်မလွှတ်” လို့ တရားမျှတမှုကို ပြခဲ့တာပဲ။
သေချာတာတော့ ဘာသာတရားတိုင်းဟာ အချင်းချင်း ချစ်ကြည်မှု ၊ စာနာငဲ့ညှာမှု နဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူတကွနေထိုင်ရေးကိုချည်း ဦးတည်ခဲ့တာပါပဲ။ ဒီမြေသည်သာ အားလုံးရဲ့ ဘုံဌာနပဲ … ဒါကို သူအပိုင် ငါအပိုင်တွေ သတ်မှတ်.. နယ်မြေတန်ဖိုးတစ်ခု သတ်မှတ်ကြ.. လုကြယက်ကြ.. တိုက်ခိုက် သိမ်းပိုက်ကြ.. နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးကြ… ခေတ်အဆက်ဆက်။ ဘာကြောင့်များ မငြိမ်းချမ်းချင် ကြ သလဲ…။
*** ဒါ .. အမှန်တရားအစစ်တစ်ခုပဲ.. လောကရဲ့ စံ နဲ့ မူ .. ယဉ်ကျေးသော နှလုံးသား စွမ်းအား ရှိတဲ့ လူဆိုတာသာ လူ.. စစ်တလင်းမဖြစ်စေနဲ့.. ဂေဟမြေ အခြေချသူ.. အရေးကြီးဆုံးတို့ ထိန်းသိမ်းဖို့ အားလုံးသော ဘဝတို့ ကျောခင်းနေတဲ့ မြေ .. ဒါ ဘုံဌာနလေ…
ဒါ.. အမှန်တရားအစစ်တစ်ခုပဲ .. တဲ့။ ကိုယ့်ဘာသာ တွေးနေမိတယ်… အမှန်တရားပဲ အစစ် .. အတု ရှိသေးလား ပေါ့။ ဟုတ်တာပေါ့.. သိပ်ရှိတာပေါ့။ ကိုယ့်အလိုဆန္ဒလောဘ နဲ့ ယှဉ်ပြီး ငါပြောတာသာ အမှန်ဆိုတဲ့ အမှန်တွေက.. လူအများရဲ့ သဘောကိုလည်း ကိုယ်စားမပြု.. လောကသဘာဝ ဓမ္မ နဲ့လည်း ဆန့်ကျင်ပြီး လူတွေရဲ့ စိတ်နှလုံးကို ညှိုးချုံးစေတယ်ဆိုရင်.. ဒါ အမှန်တရားအစစ် ဖြစ်ပါ့ မလား.. နော်။ ဟုတ်တာပေါ့.. လောကနဲ့ လူသတ္တဝါတွေကို သာယာချမ်းမြေ့စေတဲ့ စံ တွေ မူတွေ ရှိမှပဲ.. အဲဒါက အမှန်တရား အစစ်ပေါ့။ ယဉ်ကျေးသော နှလုံးသား စွမ်းအား ရှိတဲ့ လူဆိုတာသာ လူ…
စစ်အေးတွေ.. စစ်ပူတွေဟာ လူသားမျိုးနွယ်တွေကိုသာမက တိရစ္ဆာန်တွေ ရေမြေတောတောင် သဘာဝတွေကိုပါ တိုက်စားဖျက်ဆီးနေတာ… အဓိက တရားခံဟာ ရိုင်းစိုင်းစိတ်ထားရှိတဲ့ လူတွေ ကြောင့်သာပဲ။ ရန်စ လို့ ပြန် ဖြေရှင်းရင်း တရားသော စစ်ကို ဆင်ရတယ်ဆိုလည်း ဘုံဌာနဟာ ပျက်စီးရတာပဲ။ ဘယ်လောက်ကြေကွဲဝမ်းနည်းစရာကောင်းလဲ။ အပြစ်မဲ့ ပြည်သူတွေ သေကြေ ပျက်စီးရတဲ့ အခြေအနေတွေ။ ဘာအတွက်လဲ။ ဘယ်လောက် အဓိပ္ပါယ်မဲ့လိုက်သလဲ။ အသားရောင် တွေ .. ဘာသာရေးဆိုတာတွေက ဘဝတွေပျက်စီးစေတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေ ဖြစ်နေတာ ဟာ အဓိပ္ပါယ် ဘယ်လောက် ကင်းမဲ့လိုက်သလဲ။
အဖြူ အညို မဟူရာ အနီရယ် အဝါ .. အပေါ်ယံအရေပြား .. လူ့ဘဝက အဓိပ္ပါယ် ရှိရဲ့လား..
ပုဂံ ကို ဘယ်သူ တကယ်ပိုင်သလဲ။ အီဂျစ် ပိရမစ်တွေကို ဘယ်သူ တကယ် ပိုင်သလဲ။ ဗုဒ္ဓဂယာကို ဘယ်သူ တကယ်ပိုင်သလဲ။ ဂျေရုစလင်ကို ဘယ်သူ တကယ်ပိုင်သလဲ။ ဗာဆိုင်းနန်းတော်ကို ဘယ်သူ တကယ်ပိုင်သလဲ။ ရောမ ရဲ့ ဂန္ဓဝင် ယဉ်ကျေးမှုတွေကို ဘယ်သူ တကယ်ပိုင်သလဲ။ မြေပိုင်နက် သတ်မှတ်ချက်အရ မဟုတ်ဘူးဆိုရင်.. ဒါတွေဟာ လူသားတွေ အားလုံး ပိုင်တဲ့ လူ့ယဉ်ကျေးမှု သမိုင်းတွေပဲ မဟုတ်လား။ ဒါတွေကို ချစ်ကြည်ညိုပြီး ထိန်းသိမ်းမယ့်သူဆိုရင်ဖြင့် ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်.. လူသားမျိုးနွယ်သမိုင်းကို ချစ်မြတ်နိုး တန်ဖိုးထားသူပဲ။ ဘာက အရေးကြီးသလဲ။ အဘက်ဘက်က တန်ဖိုးကြီးလှတဲ့ သမိုင်းတွေ မပျက်မစီး တည်တံ့ဖို့ကလွဲလို့ ဘာကများ ပို အရေးကြီင်္းမလဲ။
ဂေဟမြေ အခြေချသူ.. အရေးကြီးဆုံးတို့ ထိန်းသိမ်းဖို့ အားလုံးသော ဘဝတို့ ကျောခင်းနေတဲ့ မြေ .. ဒါ ဘုံဌာနလေ…
ဘယ်လောက်ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါစေ.. သဘာဝကမ္ဘာဟာ နေရာတိုင်းမှာ လှတယ်။
ကန္တာရမှာတောင် လှပတဲ့ သဲမြေဟာ ရွှေရောင် ကော်ဇောပြင်ကြီး ဖြန့်ခင်းထားသလိုရှိမယ်။ အပူပိုင်း ကန္တာရပင်တွေရဲ့ အရိုင်းဆန်ဆန် အလှတွေ ရှိတယ်။ သာယာတဲ့ အိုအေစစ်လေး တစ်ခုတစ်လေ တွေ့ကောင်းတွေ့နိုင်သေးတယ်။ တောင်ဝင်ရိုးစွန်း .. မြောက်ဝင်ရိုးစွန်း တွေမှာ တောင်မှပဲ ငွေရောင် လင်းလက်တဲ့ ရေခဲပြင်တွေဟာ သဘာဝရဲ့ အလှတစ်ပါးပဲ။ နေရာတိုင်းလိုလိုမှာ.. ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာ ရေပြာပြာတွေ.. သစ်တော စိုစိုစိမ်းစိမ်းတွေ.. မြစ်ချောင်းအင်းအိုင်တွေ.. မှော်ဆန်တဲ့ တိမ်တိုက်တွေ.. တောင်ညိုတောတန်းတွေ..။ မလှတဲ့ သဘာဝ ရှာကြည့်စမ်းပါ့။ ဒီလိုပဲ ဖြူဖြူ ညိုညို မည်းမည်း လူတွေ ဟာ ချစ်တဲ့ စိတ်နဲ့ယှဉ်ပြီး တူတူနေတတ်မယ်ဆို ဘာအချက်အလက်မှ မလိုဘဲ ပျော်ရွှင် နေထိုင်သွား ကြရုံသာ။ ပြီးတော့ ဒီ သဘာဝအလှတရားတွေကို ဖြည့်တင်းရင်း.. မွမ်းမံရင်း.. ထိန်းသိမ်း ပြုစုရင်း.. စောင့်ရှောက်ရင်း ကြည်ကြည်လင်လင် စားသုံးသွားရုံသာ..။ ဒါ.. အဆန်းတကြယ် မဟုတ်.. ။ ဒါ အမှန်တရားအစစ်တစ်ခုသာ။
ယဉ်ကျေးသော နှလုံးသား စွမ်းအား ရှိတဲ့ လူဆိုတာသာ လူ.. စစ်တလင်းမဖြစ်စေနဲ့.. ဂေဟမြေ အခြေချသူ.. အရေးကြီးဆုံးတို့ ထိန်းသိမ်းဖို့ အားလုံးသော ဘဝတို့ ကျောခင်းနေတဲ့ မြေ .. ဒါ ဘုံဌာနလေ… ဘုံဌာန လေး…
ကိုယ်ချင်းစာခံစားတတ်တဲ့.. ယဉ်ကျေးတဲ့နှလုံးသားရှိတဲ့သူ.. ဘယ်သူမှ စစ်ကို မလိုလား.. ဒါ သိပ်သေချာပါတယ်။ ကျောင်းနေရမယ့် အရွယ်ကလေးလေးတွေ စစ်မြေပြင်မှာ ပြေးနေရသလို.. ဘဝရပ်တည်ရေးအတွက် လက်တွေ့ဘဝစစ်မြေပြင်မှာ တိုက်ပွဲဝင်နေရတဲ့ ကလေးလေးတွေရော။ အားလုံးဟာ ဓားစာခံတွေ။ တချို့ကလေးတွေ လူငယ်တွေကတော့ လောဘမောဟ သားကောင် တွေရဲ့ လွှမ်းမိုးစေခိုင်းမှုကြောင့် လူသတ်လက်နက်တွေ ကိုင်နေကြရ.. စစ်ပွဲတွေမှာ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ လည်း ဝေး .. ဉာဏ်ပညာ ဆင်ခြင်တုံတရား လည်းဝေး။ လူ့ဘဝက အဓိပ္ပါယ်ရှိရဲ့လား။
ဟိုဘက် ဒီဘက် စည်းရိုးလေး ဒါမှမဟုတ် စည်းမျဉ်းလေး တစ်ချက် ခြားလိုက်ရုံ နဲ့ .. ဒါ တို့ ပြည်.. ဒါတို့မြေတွေ ဖြစ်။ ပုံပန်းသွင်ပြင် အသားရောင်လေး မတူရုံနဲ့ ဒါ ငါ့လူ.. ဟိုဟာ သူ့လူတွေ ဖြစ်။ ခြုံရုံ ထားတဲ့ အဝတ်အထည် ကွဲပြားရုံ နဲ့ ဒါမှ ငါ့ ဘာသာရေး .. ဒါသာ အကောင်းဆုံးတွေ ဖြစ်။ သက်မဲ့ တွေ ရဲ့ လွှမ်မိုးမှုမှာ သက်ရှိတို့ ရူးသွပ်နေပုံများ။
မျဉ်းတစ်ကြောင်းအတွက်နဲ့ ကျောချင်းကပ်.. ကျည်ဆံတွေကို ထမ်း.. ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ငိုညည်းသံ.. နားစွင့်လို့ နှလုံးသားနဲ့ ကြည့်စမ်း.. သာတူ ညီဝေမျှဖို့ လက်တွေ့လိုအပ်မှန်း .. လူသား .. ကျည်ဆံ နဲ့ မေတ္တာ .. သင့်ရဲ့ သဘော..
ဘာကို ရွေးချယ်သင့်သလဲ။ ဘာကို ရွေးချယ်မလဲဆိုတာဟာ တကယ်တော့ ဝေခွဲရခက်စရာ တောင် မဟုတ်.. သိပ်ရှင်းလင်းတဲ့ အဖြေပေပဲ။ အမှန်တရားသစ္စာဆိုတာ ကြည်လင်ရွှင်ပျဖွယ်ရာသာ ဖြစ်ရမယ် မဟုတ်လား။ ငြိမ်းအေး သာယာစရာ ဘဝနေရေးအတွက် ကိုယ့်သဘောကျ ရွေးဖို့သာပါပဲ။
လူသား .. ကျည်ဆံ နဲ့ မေတ္တာ .. သင့်ရဲ့ သဘော..
at January 17, 20187comments:
Labels: Idea Magazine